February | 2013 | News, Art and Ideas For Burma
Filed under: OTHERS' POEMS — Nyo Gyi @ 3:08 pm
“ကျွန်တော်တို့ မြန်မာပြည်ကြီးမှာဗျာ.. “
..စစ် အာ ဏာ ရှင် တွေ ပေါ့ ဗျာ…
27, February .2013, Wednesday 12:20 P:M
Filed under: OTHERS' NEWS — Nyo Gyi @ 5:57 pm
အပြောနဲ့ အလုပ်တော့ ညီပစေပေါ့ဗျာ
” ဥပဒေဖောက်ဖျက်လာလျှင် ဘယ်သူ့မျက်နှာမှ မထောက်၊ လူကြီးသားသမီးလည်း အရေးယူမည် “
MEDIA One Journal, Vol. 1, No. 28
မီဒီယာဝမ်း အတွဲ(၁)၊ အမှတ်(၂၈) ဂျာနယ်
ပြည်သူ့ရင်ပြင်မှာ အုပ်စုအလိုက် အစွမ်းပြသွားတဲ့ ပြိုင်ကားများ
ဓီမိုကယေဆီခေတ်မှာ ပြိုင်ကားမစီးရမှာ မဟုတ်၊ စီးရမှာပါ၊ မောင်းပါ။
မိမိကြောင့် သူတစ်ပါး အနှောင့်အယှက် မဖြစ်ပါစေနဲ့။
MYANMAR NEWS WEEK JOURNAL, အတွဲ(၂)၊ အမှတ်(၆၅)၊ (၁၇-၁-၂၀၁၃)
Filed under: 8888, Education, MY NEWS, NLD — Nyo Gyi @ 2:41 pm
(National Network for Educational Reform ~ NNER)
ဤပညာရေးကွန်ယက်သည် နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာပညာရေးမူဝါဒ (National Educatiion Policy) တစ်ရပ်ချမှန်နိုင်ရန် အတွက် မြန်မာနိုင်ငံဒေသအသီးသီးရှိ ပညာရေးနှင့် သက်ဆိုင်သူအားလုံးနှင့် ပြည်ပရာက်မြန်မာနိုင်ငံသားများ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ပါဝင်လာစေရန် ရည်ရွယ်၍ ဖွဲ့စည်းခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဤပညာရေးကွန်ယက်နှင့် ချိတ်ဆက်လိုသည့် အဖွဲ့အစည်းနှင့် လူပုဂ္ဂိုလ်များသည် စာမျက်နှာ(၅)တွင် ဖော်ပြထားသည့် အီးမေး(လ်)များမှတစ်ဆင့် ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
ပညာရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကွန်ယက် (National Network for Educational Reform ~ NNER) အကြောင်းအပြည့်အစုံကို အောက်က PDF ဖိုင်တွင် ကြည့်ရှုနိုင်ပါကြောင်း။
NNER and October Seminar Statement by Nyo Gyi
ပညာရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကွန်ယက် (National Network for Educational Reform ~ NNER)၏ အကြိုဆွေးနွေးပွဲများကို အောက်ပါအစီအစဉ်အတိုင်း (၁၅၊ ၂၊ ၂၀၁၃)ရက်က စစ်ကိုင်းနှင့် မန္တလေးတွင်ကျင်းပသွားရာ စစ်ကိုင်း ဆွေးနွေးပွဲတွင် တက်ရောက်ဆွေးနွေးသူ ဦးရေ (၅၀)ခန့်လည်းကောင်း၊ မန္တလေး ဆွေးနွေးပွဲတွင် တက်ရောက်ဆွေးနွေးသူ ဦးရေ (၁၀၀)ခန့်လည်းကောင်း ရှိကြောင်း သိရပါ၏။
(၁၅၊ ဖေဖော်ဝါရီ၊ ၂၀၁၃) (နံနက် ၁၀ နာရီ)
စစ်ကိုင်း၊ အောင်မြေဦး ဘုန်းတော်ကြီးသင်ပညာရေးကျောင်း
(၁၅၊ ဖေဖော်ဝါရီ၊ ၂၀၁၃) (နေ့လည် ၂ နာရီ)
မန္တလေး၊ ၃၅ လမ်းနှင့် လမ်း ၉၀ ထောင့်၊ INTENSITY Speaking Centre
Filed under: GENERAL AUNG SAN, MY POEMS — Nyo Gyi @ 4:23 pm
၁၉၁၅ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီ (၁၃)ရက်၊ စနေနေ့
လူသားစစ်စစ်တစ်ဦးမျှသာ ဖြစ် ။
မိမိဘ၀ကို မိမိကိုယ်တိုင်ကသာ ပြဌာန်းနိုင် ။
(၁၃၊ ၂၊ ၁၃)
ပြက္ခဒိန်ကို ဒီနေရာက ယူပါတယ်
Filed under: DAYS TOPICS, OTHERS' POEMS — Nyo Gyi @ 3:10 pm
သေချာပါတယ် အဲ့ဒီနေ့မှာ . . .
ရမ္မက်ခိုးတွေ အလျှံတငြီးငြီး တောက်လောင်နေမယ်
နာကျင်မှုတွေကို ရယ်သံအုပ်အုပ်ဖြင့် ဖုန်းကွယ်ကြမယ်
နှိပ်စက်သူရဲ့လက်ကို အနမ်းမိုး အကြိမ်ကြိမ် ရွာချကြမယ်
သေချာပါတယ် အဲ့ဒီနေ့မှာ. . .
အဲ့ဒီနေ့မှာ ခင်ဗျားသမီး အိမ်ပြန်နောက်ကြပါလိမ့်မယ်။
(Valentine’s Day ကို ကြိုဆိုသာအားဖြင့်)
Feb. 9. 2013
Filed under: OTHERS' NEWS, SATIRE, Videos — Nyo Gyi @ 4:53 pm
” မင်းသားတွေက ကိုယ့်နေရာကိုယ် မနေကြတော့ဘူး “
8 DAYS A WEEK အနုပညာဂျာနယ်
၁ – ၈ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၃
Filed under: MY WRITING — Nyo Gyi @ 7:37 pm
” သန်းရွှေ အသုဘမှာ က ကြစို့ “